के धेरै सफाईले बच्चालाई क्यान्सर हुन्छ ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
हामी हाम्रा नानीबाबुहरु विरामी नहुन भनेर के के सम्म गर्छौँ । टेक्नोलोजि र जनचेतनाको बढ्दै गएको यो युगमा आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्य र सुरक्षाकालागि अनेक उपायहरु अपनाइरहेका हुन्छौँ ।
बालबालिकालाई किटाणु, जीवाणु र विषाणुबाट बचाउन सरसफाइमा ध्यान नदिने त कुरै भएन् । तर नयाँ एक अध्ययनले भने बाल अबस्थामा किटाणुबाट बचाउदै इन्फेक्सनबाट धेरै मात्रामा बचाए पछि ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्ने खतरा बढी भन्ने तथ्य अघि सारेको छ । ल्युकेमिया हुने अबस्थाको पछाडी भने बच्चालाई यदी इन्फेक्सन भइराख्यो भने इम्युन सिष्टम अर्थात प्रतिरोधी क्षमता दह्रो हुन्छ ।
तर यसरी इन्फेक्सन नै नभई कोही हुर्किएमा उसमा त्यो क्षमता हुदैन र रोगी हुने सम्भावना बढी रहन्छ । नेचर रिव्युज क्यान्सर नामको जर्नलमा छापिएको अध्ययनको लेखमा अक्युट लिम्फोब्लाष्टिक ल्युकेमिया जुन बच्चामा हुने क्यान्सर रोगकोलागि दुई पक्ष जिम्मेबार रहेका छन् ।
जसमा जन्मजात नै जेनेटिकको कारण र पछि भने बच्चालाई इन्फेक्सन नहुदाँ (धेरै सुरक्षित र धेरै सफाइको कारण) इम्युनिटी विकास नहुदाँ यो रोग लाग्न सक्छ ।
सजिलो गरि अध्ययनको निष्कर्ष भनेको यदी जेनेटिक कारणले यो रोग सरेको हैन् भने बाल अबस्थामा धेरै सरसफाइमा ध्यान दिने र किटाणुबाट बचाउने गर्दा उनिहरुमा लिम्फोब्लाष्टिक ल्युकेमिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यो यस्तो क्यान्सर हो जुन जन्मअबस्थादेखि ४ वर्षसम्मका बच्चाहरुलाई लाग्ने गर्छ । यो रोग अहिले विकसित मुलुकहरुमा धेरै मात्रा देखिन थालेको छ । र यसको मुख्य जिम्मेबार भने सरसफाइ नै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
क्यान्सर रोगका लक्षण विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । शरीरको कुनै अंगमा फोका वा गाँठो देखा पर्नु, अचानक शरीरको कुनै भागबाट रगत बग्नु, छालामा असामान्य बद्लाव आउनु, भोक कम लाग्नु, बढी खोकी लग्नु, खोकीमा रगत देखा पर्नु यसका सामान्य लक्षण हुन् ।
यदी शरीरको कुनै पनि अंगमा कुनै पनि रोगको लक्षण देखापरेको एक महिनासम्ममा उपचार गर्दागर्दै पनि निको भएन भने एकपटक चिकित्सकका गएर क्यान्सर रोगको अनिवार्य परिक्षण गराउन आवश्यक छ ।
Don't Miss it खानेकुरा अनियन्त्रित रुपमा खानुको बेफाइदा, यस्ता छन्
Up Next के तपाईलाई पेटभरी खादा पनि छिट्टै भोक लाग्छ ? किन ? जान्नुहोस्
खानेकुरा सम्पूर्ण जीवनका लागि अपरिहार्य वस्तु हो, एउटा नैसर्गिक अधिकार पनि हो। तर, आज आएर यही अपरिहार्य वस्तुको गुणात्मक आवश्यकता…